जनमतको कदर गरिनुपर्छ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
जनमतको कदर गरिनुपर्छ
२०७० मंसिर ९, आईतवार ०८:०२ गते
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका प्रत्यक्षतर्फका सबै अन्तिम परिणामहरु सम्भवतः आजसम्म सार्वजनिक भइसक्ने छन् । नयाँ संविधान बन्ने आशा र विश्वासमा अहिले आमनागरिक रहेका छन् र आगामी एक वर्षभित्र संविधान बनिसक्ने आश्वासन पनि जिम्मेवार नेताहरुले दिइरहेका छन् । यसैबीच, सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको एनेकपा माओवादीले चुनावमा धाँधली र षड्यन्त्र भएको भन्दै यो निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । आफ्नो पक्षमा निर्वाचनको परिणाम नआउँदा र पराजयलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न नसकेर एनेकपा माओवादीले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आइसकेको सो पार्टीले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर दुनियाँ हँसाउने काम मात्र गरेको छ ।
यसपटकको निर्वाचन विगतका निर्वाचनहरुको तुलनामा शान्त र स्वच्छ रुपमा सम्पन्न भएको कुरालाई सबैजसो नेपालीले स्वीकार गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत यो निर्वाचनको प्रशंसा गरिरहेको प्रसंग यहाँ स्मरणीय हुन सक्तछ । ठोस प्रमाणबिना र मात्र कल्पनाको सहारा लिएर आएको यस्तो प्रतिक्रियाले एमाओवादीको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने काम मात्र गरेको विश्लेषण अहिले राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले गरिरहेका छन् । जनताको ताजा जनादेशअनुसार अहिले एक नम्बरबाट तीन नम्बरमा झर्न पुगेको यो पार्टीले जसरी भए पनि जनभावना र जनमतको कदर गर्नुभन्दा अरु कुनै विकल्प देखिएको छैन ।
काठमाडौँको १० नं. क्षेत्रमा ठूलो मत अन्तरले प्रचण्ड पराजित हुने अवस्था देखेपछि मात्र एनेकपा माओवादीले यस्तो अप्रिय निर्णय गरेको हुनुपर्छ । तर, काठमाडौँमा हारे पनि सिरहामा प्रचण्डले चुनाव जितेका छन् । उनीविरूद्ध यदि धाँधली भएकै हुन्थ्यो भने सिरहामा पनि उनी पराजित हुनुपर्ने थियो । जसरी पनि जित्नुपर्ने अहम्वादी मानसिकता बोकेको उक्त पार्टीले यसपटकको निर्वाचन परिणामबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदलेर भावी राजनीतिक मार्गचित्र तयार गर्न हामी प्रचण्डसँग आग्रह गर्दछौँ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि लिएर युरोपियन युनियन, कार्टर सेन्टरलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहजतापूवर्क प्रवेश गर्न एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको परिणाम नस्वीकार्नु भनेको प्रजातन्त्रविरोधी चरित्र मानिन्छ । संविधान लेखन प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक प्रारम्भ गरेर एनेकपा माओवादीले प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अहिले नेपाली जनता जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाट जिम्मेवारपूर्ण कार्य र व्यवहारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यसैक्रममा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबाट पनि हामी सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।